Wadahadalka suuqa kala iibsiga: Manchester United miyey heshiis la gaartay Mandzukic? - KU SAMEEYSAA
ACCUEIL » SPORTS Wadahadalka suuqa kala iibsiga: Manchester United miyey heshiis la gaartay Mandzukic?
Wadahadalka suuqa kala iibsiga: Manchester United miyey heshiis la gaartay Mandzukic?
Daaqadaha kala iibsiga ee horyaalada ugu muhiimsan Yurub waa xiran yihiin, laakiin waligood kama daahna inaad sugto Janaayo. Guji halkan si aad u eegto xawilaadihii ugu dambeeyay iyo inaad ku wargeliso warka ugu dambeeya ee hoos ku qoran.
Wakiilada bilaashka ah ee 10 ee 2020 | Dib u eegista wareejinta Yurub
Heshiis dhex maray Man United iyo Mandzukic
Warbixinta Tuttosport in Manchester United ay heshiis afka ah la gaartay weeraryahanka Juventus Mario Mandzukic on saxiixa weeraryahanka reer Croatia.
Halyeeyga ayaa si xoogan loola xiriirinayaa inuu u dhaqaaqayo Old Trafford dhowr bilood haatan, laga soo iibsado xagaaga xagaaga. Kadib dhaqdhaqaaq aan noolayn, waxay u jeediyeen Janaayo waxayna umuuqataa inay sameeyeen horumar la taaban karo.
Mandzukic ayaa la rumeysan yahay inuu u diiday 7 milyan ginni sanadkii sanadkii Al-Rayyan ee Qatar taasoo door bideysa inuu sii joogo horyaalada Yurub ugu fiican. Haddii heshiiska uu yahay mid sharci ah, waxaa la xaqiijin doonaa Janaayo 1er.
Rakitic, Matic oo ka mid ah bartilmaamedyada kooxda Inter Milan
Inter Milan ayaa isha ku heysa inay deegaan cusub ka keento suuqa kala iibsiga bisha Janaayo, Warbixinta Calciomercato .
Inter ayaa loo maleynayaa inay u baahan tahay ikhtiyaar kale marka loo fiiriyo goos gooskooda, gaar ahaan hadii ay doonayaan inay si dhab ah ugu tartamaan Juventus hanashada horyaalka Serie A. Ivan Rakitic et Nemanja Matic ayaa weli noqon doona labada bartilmaameedka ugu weyn ee kooxda, oo kubad qatar ah, sida lagu sheegay warbixinta: Sergej Milinkovic-Savic ].
Sandro Tonali sidoo kale waxaa looga shakisan yahay inuu qeyb ka yahay kooxda, laakiin waxaa ka harsan bilo yar ka hor furitaanka daaqada, taasoo muujineysa dareen ah in qaybo badan oo guuraya ay ugu talo galeen Conte
Manchester City ayaa xiiseyneysa Ake
Kooxda difaacaneysa Premier League ee Manchester City ayaa dooneysa inay soo xerogeliso xiddiga Bournemouth Nathan Ake inta lagu guda jiro bisha kala guurka ee Janaayo, Manchester Evening News .
Magaalada ayaa mararka qaar la halgameysay bilowga ololaha Premier League, iyadoo dhibaatooyinka difaackooda loo arko mid ka mid dhibaatooyinka ugu weyn. Haatan, si kastaba ha noqotee, haddii ay ku guuleystaan ​​inay soo jiitaan qof sida Ake oo kooxda ah, tani waxay calaamad weyn u noqon kartaa ujeedka kooxda Liverpool ee horyaalka.
Dutch Ake, da 'da' 24, wuxuu qayb ka ahaa Cherries tan iyo markii uu soo laabtay. 2017, asalkeeduna wuxuu ku soo noqdey lix sano oo Chelsea ah.
Haddii Magaalada ay si sharci ah u danaynayso dhaqaajinta dabeecadan, waxay ku qasbanaan doontaa inay si dhakhso leh wax uga qabato.
- Jose Mourinho ayaa diiday inuu ku laabto kooxda uu hogaamiyo ee Lyon, kooxda weyn ee '1, ayuu yiri CMR . Tababarihii hore ee Manchester United ayaa ku wargalin lahaa kooxda in goolkiisii ​​ugu horreeyay uu ahaa inuu ku laabto Premier League xilli uu isku dayay inuu dib u soo celiyo ka dib xilli ciyaareed xun oo uu joogay Old Trafford.
- Juventus ayaa xiiseyneysa isku day ay la soo wareegeyso. Difaaca bidix ee Chelsea Emerson waxaa wariyey Calciomercato . Sanadaha 25 ee ciyaartoygu waxaa loo arkaa mid ka mid ah bartilmaameedka ugu weyn ee kooxda heysata horyaalnimada Talyaaniga ee isku dayaya inay dhisaan awoodahooda dhinaca bidix. Si kastaba ha ahaatee, Chelsea ayaa laga yaabaa inay u soo bandhigto qandaraas dheeri ah si looga hor tago gabadh da 'ah.
Maqaalkani wuxuu horey u soo galay (Ingiriisi) http://espn.com/soccer/blog-transfer-talk/story/3961946/transfer-talk-manchester-united-reach-mario-mandzukic-agreement
VdS: jilaayaal xoog leh
Youtube: WACS. PSG-Monaco: Halkaan ka daawo haweenka ciyaartoyda labada kooxood sawirada